အချစ် ခါးခါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အချစ် ခါးခါး	5
Posted by Foolish Girl on Sep 30, 2016 in Poetry |5comments
ခါးသက်သက် အရသာကိုမှ တပ်မက် မိနေတာလား????
ဒီလိုနဲ့ ခါးသက်ခြင်းတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ခူးခပ်စားရင်း
Thint Aye Yeik says: အချစ်ဟာ ခါးတယ် လို့ သိထားပြီဆိုတာ. . .
အချစ်ဟာ ဘယ်လို အရသာ ဆိုတာကိုတောင် မသိတဲ့ ကျနော့်ထက်ထက်တော့ သာတာပဲ
Foolish Girl says: စာရေးဆရာမ ဂျူးပြောသလို
အချစ်ဆိုတာဘီယာလိုဘဲ ခါးသလိုလိုချိုသလိုလိုဖြစ်သွားတယ် ဆိုပဲ
kai says: ၀မ်းမှာခါး… တဲ့..။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဖူးလစ်ဂဲလ်ကို ဗူးအစစ်နွှဲခြင်တယ် မူးရစ်စွဲနေမိပါပီ ဦးတနှစ်ကဲပါရစေ…
Foolish Girl says: ဦးကြောင်ကြီး မူးကြောင်ပြီး